Ireo tag malaza sy ilaina indrindra apetraka amin'ny ecommerce | Martech Zone
Alahady Oktobra 22, 2017 Alahady Oktobra 22, 2017 Douglas Karr
Mba hametrahana, handrefesana ary hanatsara ny fanovana rehetra hanatsarana ny valin'ny ecommerce anao, ny fakana ny angon-drakitra mifandraika amin'ny mpampiasa sy ny hetsika rehetra dia manakiana. Tsy afaka manatsara izay tsy refesinao. Mbola ratsy kokoa aza, raha mametra ny zavatra refesinao ianao, dia afaka mandray fanapahan-kevitra manimba ny varotrao amin'ny Internet.
As Softcrylic, mpilalao data Data & Analytics tsy mitanila mpivarotra milaza, ny fitantanana tag dia manompo ny Digital Marketers 'miaraka amin'ny fahitana lavitra momba ny fanarahan-dia ny mpitsidika, ny fikendrena ny fitondran-tena, ny fanamarihana manokana, ny fanamafisany ary ny fanamafisana ny angona.
Inona no atao hoe Tag?
Ny fanondroana dia eny rehetra eny amin'ny alàlan'ny fanoratana script ary koa ny fisamborana angona mifandraika amin'ny tranokalanao. Ireo sehatra Analytics dia nahazo tag am-polony tamin'ny fametrahana fototra. Raha tsy mampifangaro angon-drakitra ianao mba hakana ao amin'ny sehatra e-varotrao, na dia izany aza, maro ny marika fanakianana maro hafa tsy hita.
Ity infographic avy amin'ny Softcrylic ity dia manome tsipiriany momba ireo marika tokony apetrakao ao aminao pejy fandraisana e-varotra, pejy fiantsenana, pejy vokatra, pejy sarety, pejy fizahana ary pejy fandraisana ho mpikambana.
Izy ireo koa dia manome fomba fanao tsara indrindra amin'ny fampiharana ny tagging, ao anatin'izany:
Audit Management tag - Tag Auditing dia fanombanana ara-potoana sy ara-potoana ary fiantohana kalitao mandeha ho azy an'ireo tag mba hahalalana tsara sy hanitsiana ireo mari-pamantarana tapaka, fitondran-tena mitifitra, fahita matetika, fahitsian'ny angona ary famoahana data.
Fitantanana tag misy tarika an-tariby data - Ny fampiharana "Data Layer" voarafitra tsara dia manampy ny Rafitra fitantanana Tag hananana fifehezana faratampony, fahamendrehana ary fahamendrehana amin'ny fifanakalozana data amin'ny sehatra rehetra sy ny fanaingoana ny marika manokana.
Mampifandanja ny Tags Piggybacking - Piggybacking dia sabatra roa lela. Manampy amin'ny famerenam-potoana tsara kokoa izany. Na izany aza, rehefa tsy tsara tantana dia mety hampitombo ny fotoana fandefasana pejy izany, hampandefitra ny fiarovana ny angon-drakitra ary hanaratsy laza ny marika.
Ity ny sary. Azonao atao ny misintona ny PDF avy amin'ny Softcrylic.
Tags: mari-pahaizana momba ny analyticspejy saretypejy fizahanapejy fanamafisanapejy fandraisana e-commercee-varotra marikafanamarihana ecommercetagan'ny ecommerceSary torohaypage productpejy fiantsenanasoftcrylicfanaraha-maso tagfanaraha-maso tagfanaraha-maso fitantanana ny tagtaggingTagsmisaotra pejytagan'ny tranonkala
Fomba fampiasana mahomby amin'ny teny lakile amin'ny SEO sy bebe kokoa